बधाई दिँदै गाउँलेले भने – सपनाले गाउँकै नाम राखिन्…पूरा पढ्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौँ : बुटवलका मन्दिर, प्र’हरी चौ’कीको प्रतिक्षालय, ट्रा’फिक चोक, चौराह । कुनै बेला यतै भेटिन्थिन् उनी । १५ वर्षकै उमेरमा जीवनका तीता भोगाइले उनलाई सडकमा पु¥र्‍यायो । आकाशलाई छानो जमिनलाई ओछ्यान बनाएर बुटवलका गल्ली र चोकहरुमा उनले तीन महिना बिताइन् । सानो उमेरमै सड’कको जिन्द’गी भोगेकी उनी हुन् सपना रोका मगर ।
दिनभर टोलाइ’रहन्थिन् सपना । चि’च्याएर रुन खोज्थिन् तर आवाज भित्रै हराउँथ्यो । के भइरहेको छ, सोच्न सक्ने अवस्था थिएन । भोकै रात काट्थिन् । शरीरमा पाइन्ट, टिसर्ट अनि ज्याके’ट । लगलग का’म्दै जाडोको त्यो समय एकै ठाउँमा नबोली बस्थिन् । ओठ’बाट हाँसो खोसिएको थियो । बोली बन्द भएको थियो । कसैले बोलाउँदा पनि झ’संग हुन्थिन् । कतै परबाट बोलाएझैं कानमा अरुको बोली ठो’किन्थ्यो । नि’न्द्रा हराएको थियो । द’या गरेर कसैले दिएको खानाले पेट भ’र्थिन् ।
त्यो पनि नपाउँदा ६/७ दिनसम्म भो’कै बस्थिन् । भो’कले रन्थ|निँदा मनमनै कसैले एक छाक दिए हुन्थ्यो भन्ने प्रा’र्थना गर्थिन् । पानी पिएरै भो’क मे’ट्न खोज्थिन् । अनि सानो डा’यरीमा कलमले कोरिबस्थिन् । दिनभर स’डकमै बिताए पनि रातमा प्रह’री चौ’कीको प्रतिक्षालय पुग्थिन् उनी । कारण, कसैले गलत नजरले हेरे प्रह’रीलाई गुहार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो उनलाई ।
स’डकमा जीवन बिताउने छोरी मान्छेलाई हेर्ने दृ’ष्टिकोण फरक हुन्छ । चौ’की बाहिर रात क’टाए, केही भयो भने प्रहरी चौ’कीमा प्रहरीहरु त हुनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो,’ स’डकको जीवन सम्झँदै सपना सुनाउँछिन्,’ढोकामा उभिने एकजना प्र’हरी दाइले सँधै मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो । साँझ पर्ने’बित्तिकै आइपुग्छ, कसको छोरी होला, कहाँबाट आइन् होला भन्ने सोच्दो हो ।’ त्योबेला उनको शरीरको तौ’ल घटेर ३२ किलो भयो ।
एकदिन सपनालाई सहनै नसक्ने भो’क लाग्यो । बि’स्कुट के खान लागेकी थिइन् उनको ध्यान छेउमै रोइरहेको अ’नाथ बच्चातिर गयो । आफूले खाँदै गरेको बि’स्कुट त्यो बालकलाई दिइन् । त्यतिखेर झल्याँ’स्स म्याग्दीमा रहेका आमाबुबाको झल्को आयो । ‘धेरै याद आयो उहाँहरुको । कान्छी छोरी मलाई घरमा सबैले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । खाना नखाँदा जब’रजस्ती खुवाउनु भएको दिनको याद आयो,’ सपनाले सुनाइन् ।
त्यसपछि सपनाले सड’क छोड्ने निर्णय लिइन् । सोचिन्, ‘म यस्तो मान्छे त होइन, के बिग्रे’को छ ग’ल्ती सबैले गर्छन् । मैले मेरो गल्ती सुधा’र्नुपर्छ ।’ त्यसपछि उनले आत्मविश्वास बढाएर सड’कको जिन्दगी त्यागिन् । विद्यालय पढ्दै गर्दा सपनाको हातमा मोबाइल प¥र्‍यो । कक्षा ९ मा फेसबुक खोलिन् । नयाँ साथीहरु भेटिन् । नराम्रो साथी सं’गतमा रमाउन थालिन् । २०७३ मा श्री महेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिकबाट एसएलसी दिएर कलेज पढ्न बेनी आइन् । भ’र्चुअल संसारमै रमाउन थालिन् उनी ।
फेसबुकबाटै भेटेको एक व्यक्तिसँग बिहेको सम्बन्ध गाँसियो । तर, त्यो सम्बन्धलाई बिहे मा’न्दिनन् उनी । ‘बिहेकै रुपमा त्यसलाई लिँदिनँ । कसैको जिन्दगी स’पार्न कसैको जिन्दगी प्रयोग गरिएको थियो । म प्रयोग भएँ त्यो ठाउँमा,’उनले सुनाइन्,’घर परिवार कसैले सुधा’र्न नसकेको व्यक्तिलाई बिहे गरिदियो भने सुध्रि’न्छ भन्ने उसको परिवारलाई लाग्थ्यो । त्यो परिबन्धमा सम्बन्ध जो’डियो ।’
त्यतिबेला उनलाई पनि सुधार्न सक्छु भन्ने लागेको रहेछ । तर, एकअ’र्काप्रति क’दर नभएपछि तीन महिनामै सम्बन्ध टुट्यो । त्यो बेला ‘वि’वाह’लाई खै’लौनाको रुपमा लिइएको उनी सुनाउँछन् । सम्बन्ध टु’टेपछि म्याग्दी फर्किन् उनी । आमाले बिहे भएको छोरी पतिकै घरमा बस्नुपर्ने सल्ला’ह दिएपछि उनी फेरि त्यो सम्ब’न्धमा फ’र्किन् । २ वर्षअघिको तीजमा घर फर्कँदा उनीमाथि नराम्रो व्यव’हार गरियो । या’तना दिइयो ।
त्यो सम्बन्ध टु’टेपछि उनको मनमा मर्ने सोचहरु मात्र आउन थाल्यो । धेरै पटक आ’त्मह’त्याको प्रयास गरिन् । जीवनदेखि हा’रेर कहिले पङ्खा’मा पा’सो लगाइन् त कहिले छतको डिलमा आँखा ब’न्द गरेर हिँडिन् । तर, उनको म’र्ने हर प्रयास असफल भयो । त्यसपछि हो सपना स’डकमा आएको ।
समाजले अनेक कुरा गर्थे । सेतो कापीमा लागेको दागझैं आफ्नो जिन्दगीमा त्यो सम्बन्धले बनाइदिएको दागले उनलाई अर्धपाग’ल नै बनायो । ‘फ्र’स्टेसनजस्तो आखिर के नै गर्न सकें र भनेर धेरै टोलाउँथे । डि’प्रेसनजस्तो अनुभव। गाह्रो भयो बाँच्न,’ सडक जीवन सम्झ’न्छिन्,’साँझ निदाए भने भोली उठ्छ उठ्दैन ठेगान हुन्थेन। बेलाबेला बे’होस् हुन्थें ।’
सडकको त्यो जीवन सम्झँदा आज पनि उनको मनमा चिसो पस्छ । ‘पीडा सुनिदिने मानिस कोही होस् । कसैले मेरो पीडा सुनिदिओस् भन्ने लाग्थ्यो । तर सडकको मान्छेसँग को बोल्न आउँथ्यो र ?’ अवरु’द्ध गलामा उनले प्रश्न गरिन् । स’डकबाट म्याग्दी फर्केर उनले १२ को पढाइ सकिन् । त्यसपछि बेवा’रिसे श’व व्यवस्थापनमा विनयजंग बस्नेतसँग मिलेर काम गर्न थालिन् । विनयजंगलाई एसएलसी दिनु अगावै चि’न्थिन् उनी ।
आफूले पनि सडकको जिन्दगी बिताएकै कारण बेवा’रिसे श’व व्यवस्थापनमा संलग्न भइन् । ‘हिजो समयमा त्यसरी नै हिँडेको भए के थाहा म बे’वारिसे भएर मर्नु पो प’र्थ्यो कि । त्यही कारणले मेरो जीवनसँग मेल खाएको र मानव संवेदनासँग जोडिएको भएर यो सेवामा लागें । ‘बेवारिसे ला’स भन्नेबित्तिकै पारिवारिक आ’त्मियताको अनुभव हुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।
बीबीसीको प्रभा’वशाली ‘सय महिला-२०२०’ को सूचीमा नेपालकी सपना – तीन वर्षदेखि श’व व्यवस्थापनमा सक्रि’य सपना १ वर्षयता फ्रन्ट’लाइनमा रहेर दा’गब’त्ती दिइरहेकी छिन् । अहिलेसम्म सयभन्दा बढी बे’वारिसे श’वको स’दगत गरिसकिन् सपनाले । विनयसँग मिलेर भने ३ सयभन्दा बढी श’वको स’द्गत गरिसकेको उनी बताउँछिन् ।
कुनै समय छोरीले श’व आएको बाटो देख्यो भने त्यता फर्किनु हुँदैन भनेर आमाले सपनालाई लुकाउँथिन् । तर, अहिले सपनाको कर्मभू_मि नै आर्याघा’ट बनेको छ । १७ वर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक १७ वर्षकै बेवा’रिसे युवतीको सद’गत गरेकी थिइन्। ‘उसको अनुहार हेर्दा झस्केको थिएँ म । त्यो बेला म पनि १७ वर्षकै थिएँ। हिजोको समयमा म सडकमै मरेको भएँ । आज यही लासको ठाउँमा म पो हुन्थें कि । भावुक पनि भएँको थिएँ,’ आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।
पछिल्लो समय उनलाई बेवारिसेको उपनाम नै दिइएको छ । बे’वारिसे व्यवस्थापन तथा पुन’र्जीवन के’न्द्रमा आ’बद्ध सपनाको नाम हालै बेलायती सञ्‍’चारमाध्यम बीबीसीले सार्वजनिक गरेको विश्वभरका सय प्रेर’णादायी महिलाको सूचीमा प¥र्‍यो । ‘तेरो छोरीले गाउँको नाम फाल्यो । परिवारको नाक काट्यो,’ भन्ने आफन्तहरु त्यस दिन बिहानै सपनालाई बधाई दिन घरमै आए । सपनाकी आमाबुवालाई बधाई दिँदै भन्दै थिए, ‘सपनाले गाउँकै नाम राख्यो । विश्वमा सपना कहाँको भन्यो भने म्याग्दीको भनेर कुरा आउँछ।’
त्यतिबेला आमा खाना खाँदै थिइन् । खाँदै गरेको गाँ’ससँगै आमा खुसीले रोइन् । बुबा पनि पहिलो पटक त्यसरी खुसीले रोएको देख्दा आफूले जीवनमा केही उपलब्धि पाएको भन्ने सपनालाई लाग्यो । अघिल्लो दिन रातिसम्म पारिपट्टि गाउँमा अ’पाङ्ग/असक्त’लाई खाद्यान्न बाँ’ड्न व्यस्त भएकी सपनाले भने ओछ्या’नमै हुँदा त्यसबारे खबर पाएकी थिइन् ।
विदेशबाट दाइ र दिदीको बधाई पाइन् । राज्यले आफ्नो कामको मूल्यांकन नगरे पनि अन्तर्रा’ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेको बताउँछिन् सपना । ‘दिनरात भोक प्यास नभनिकन हामी खटिरहेका थियौं । खाना खाने, पानी पिउने फुर्सद हुँदैन थियो । त्यसरी हिँड्ने क्रममा राज्यले मूल्यांकन गरेन,’ उनले भनिन्, ‘बीबीसी जस्तो ठूलो मिडियाले हाम्रो मूल्यांकन गरिदियो । एकदमै खुसी छु ।’
कहिले रातको १ बजे उठेर शवको व्यवस्थापनमा गर्छिन् त कहिले ला’सलाई दा’गब’त्ती दिएर १२ बजे ओ’छ्यान पस्छिन्। बेवा’रिसे श’व भेटियो या अ’लपत्र परेका मानिसहरु भेटिए भने सुरुमै सपना र विनयको फोन बज्छ । रातभर बे’वारिसे ला’स व्यवस्थापन बिताएका दिनहरु कै’यन छन् ।
केही दिनअघि मात्रै ललितपुरमा बे’वारिसे श’व भेटिएको भन्दै प्रह’रीले विनय र सपनालाई डाके । रातको १ बजे मस्त नि’न्द्रामा थिइन् सपना । प्र’हरीले श’व दुर्ग’न्धित भइसकेको भनेपछि उनी दुई त्यति नै बेला उठेर व्यवस्थापनमा लागिन् । ‘१ बजे गएका हामी लगभग बिहान ५ बजे पो’स्टम’र्टमको प्र’क्रिया हुँदाहुँदै ६ बजेतिर ला’स जला’उन सुरु भयो,’ उनले भनिन् ।
छोरीले दा’गब’त्ती दिने मान्यता छैन हि’न्दु परम्प’रामा । तर १ वर्षयता सपनाले त्यो मान्यता तोडेर बे’वारिसेको सेवा गर्दै आएकी छिन् । उनले पहिलो पटक स’द्गत गर्दा आमासँग अनुमति मागेकी थिइन् । उनलाई आमाले बे\_वारिसेको सद्गत गर्नु भाग्यको कुरा रहेको भन्दै हौसला दिइन् । तर समाजले मृत’कको जात नबुझी सद्गत गरेको भन्दै उनको कुरा काट्थे । ‘छोरी मान्छेले सद्ग’त गरेको देख्दा त्यो शवको आ’त्माले मु’क्ति पाउँदैन’ भन्ने कुरा नसुनेका होइनन् । तर उनलाई लाग्छ,’वर्षौंदेखि स’डेर, गलेको श’वले दा’गबत्तीको आस गरेको हुन्छ ।’
हरेक परिवारमा छोराकै जन्म हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले छोरीले पनि दा’गब’त्ती दिनुहुन्न भन्ने कुरा चि’र्दै उनी अगाडि बढिन् । उनका बुवाआमा तीनै छोराछोरीको हातबाट दा’गब’त्ती लिने कुरा गर्छन् । ‘हामी म¥र्‍यौं भने त हाम्रो डल्ली रुँदा पनि रुँदिन होला भन्नुहुन्छ । त्यतिका ला’सलाई दा’गब’त्ती दिइसकिन् भनेर आमाबुवाले जि’स्काउनु हुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।
बेवा’रिसेको श’व धुँवामा परि’णत भइरहँदा कस्तो अनुभव हुन्छ ? प्रश्न गर्दा जवाफमा उनले भनिन्,’खुसी लाग्छ । कति समयदेखि खुम्चे’र बसेको शरीरमा दा’गब’त्ती दिन्छौं हामी । उसको सद्ग’त गरिएको शरीर खुल्दै हावामा उड्दै जान्छ । अब उसको कर्मअनुसार स्वर्ग वा नरक जान्छ भन्ने लाग्छ ।’
अब सपनाले स्ना’तक पढ्ने सोचेकी छिन् । आफ्नो जीवनलाई बेवा’रिसेकै व्यवस्थापनमा समर्पित गर्ने उनको सपना छ । अलपत्र स’कडका बेवारि’सेलाई हाँस्न सिकाउने सपना जिन्दगीसँग हार्ने’हरुलाई हिम्मत नहार्न हौसला दिन्छिन्, ‘हिजो म माग्नेसमेत भएको थिएँ । कसैले चिन्न नसक्ने भएको मान्छे अहिले सबैसँग कुरा गर्न सकेकी छु । त्यसैले सबैलाई हिम्मत नहार्नुहोस् भन्न चाहन्छु ।-इ कान्तिपुर बाट
Prevडा. भट्टराई भन्नुहुन्छ : गणत’न्त्रको भात पाक्न ढिलो हुँदा राजत’न्त्रको गो’बर नखाउँ !
Nextकाठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि फर्किनन्, नगरपालिकाको कामकाज पुरै अलपत्र…हेर्नुहोस् ।